एयरलाइन surcharges फिर्ता र लक्ष्य चोटी यात्रा डेटा
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » एयरलाइन surcharges फिर्ता र लक्ष्य चोटी यात्रा डेटा
एयरलाइन्सले ग्रीष्म throughoutतुमा लोकप्रिय यात्रा मितिहरूमा १० देखि to $० सम्मको सरचार्ज थपेको छ, यस्तै उनीहरूले विगतको छुट्टीको मौसममा गरेका थिए।
एयरलाइन्सले ग्रीष्म throughoutतुमा लोकप्रिय यात्रा मितिहरूमा १० देखि to $० सम्मको सर्चार्जहरू थपेका छन, जस्तै उनीहरूले यो विगतको छुट्टीको मौसम गरे। लोकप्रिय यात्रा मितिहरूको लागि अधिक चार्ज गर्न सायद नयाँ विचार हो, अवश्य हो, र यी अधिभारहरूले एयरलाइन्सहरूलाई विशेष शिखर मितिहरू लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ।
युएसए टुडेका अनुसार, "पाँचवटा ठूला एयरलाइन्स — अमेरिकी, डेल्टा, कन्टिनेन्टल, युनाइटेड र युएस एयरवेज 73 74 को most on दिनमा जून १० देखि अगस्त २२ सम्म अधिकांश उडानमा बचत गरीरहेका छन्।" दक्षिण पश्चिम र JetBlue सँग अधिभार छैन, र यो स्पष्ट छैन कि अन्य कम लागत वाहकहरू अधिभार गेममा छन् भने।
सस्तो अधिभार, १० डलर, प्रायः मंगलबार र बुधवार हुन्, र सब भन्दा महँगो, $ 10, आइतवार हुने गर्दछ। बाँकी दिनहरू सामान्यतया २० डलर हुन्छन्। जुलाई एक अधिग्रहण बिना मात्र दिन हो।
म यी अधिभारहरु को बारे मा अस्पष्ट छु। मलाई लाग्छ कि उनीहरू अपराधी हुन् - उनीहरूले २०० for को लागि मेरो सबैभन्दा खराब एयरलाइन्स फीसको सूची बनाए। तर चीजहरूको भव्य योजनामा ​​एयरलाइन्सहरूले केवल उनीहरूले के गरिरहेका छन्: जुन दिनमा मानिसहरू वास्तवमै उडान गर्न चाहन्छन् त्यसमाथि बढी चार्ज गर्दैछन्। त्यो व्यवसाय हो। निस्सन्देह, यस अवस्थामा, "दिनहरू मानिसहरू उडान गर्न चाहन्छन्" प्रभावी रूपमा सम्पूर्ण गर्मी हो, र यी अधिभारहरू यसैले डे फेक्टो भाडा वृद्धिलाई भुक्तान गर्छन्। र छुट्टी अधिभार भन्दा फरक, यहाँ लिईएको कम्बल दृष्टिकोणको अर्थ हो यो अधिभार अपरिहार्य छ (जब सम्म तपाईं साउथवेस्ट वा जेटब्लू बुक गर्नुहुन्न)।
तर यात्रुहरूलाई हानिकारक एयरलाइन्स गिमिक्ससँग व्यवहार गर्न प्रयोग गरिन्छ। गहन मूल्य तुलना गर्नुहोस् र भाडा छान्नुहोस् जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ। र यदि तपाईं सिद्धान्तमा सर्चार्ज भुक्तान गर्न चाहनुहुन्न भने, एयरलाइन्सहरू सफा गर्नुहोस् जुन उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने बानी परेको छ।
पाठकहरू, तपाइँ यी "छुट्टी" अधिभारहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? के तिनीहरू रिसाउने लायक छन्? वा तिनीहरू मध्य-प्रेरणा उद्योग योजना को एक लामो लाइन मा नवीनतम हो?